August 10, 2010 at 11:35 pm Leaveacomment	စာရေးဆရာတွေနှင့်ပသတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချိန်သည် သူတို့ အောင်မြင်ကျော်ကြားချိန်မဟုတ်။ သူတို့ ကျဆုံးခါနီးပြီ ..ဟုဝေဖန်ခံနေရချိန်၊သူတို့ ဖန်တီးသမျှ အနုပညာတွေကို လူတွေက မကြိုက်နိုင်သည့် အချိန်ပဲဖြစ် သည်။ အနည်းဆုံး ကျွန်မတစ်ဦးတည်းအမြင်မှာပေါ့လေ။ အဲသည့် အချိန်မျိုးမှာရှိသည့် စာရေးဆရာ၊အနုပညာရှင်တွေ၏ စိတ်ကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားပါသည်။
သည်တော့ ကျွန်မတို့သည် လူတွေနှင့် ရောရင်း နေရင်း ထိုင်ရင်းပဲ စာတွေဖတ်ခဲ့ကြ။ အတွေးတွေတွေးခဲ့ကြ။ စာတွေရေးခဲ့ကြရသည်။ စာရေးဆရာတွေနှင့် အနုပညာသမားတွေသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကင်းကွာစွာ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ဖြစ်တည်လိုမှု (solitude ) ကို တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်လိုအပ်ကြသည်။ ဒါကို အနုပညာသမားတိုင်း ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖူးကြသည်။ ကျွန်မလည်း ဖြတ်သန်းဖူးသည်။ သို့သော် ထို တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်တည်နေထိုင်မှု( solitude) ကို ကျွန်မတို့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ လိုအပ်ကြသလဲ။ အဲဒါက နည်းနည်းဦးနှောက်ခြောက်စရာ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PS-ကလျာမဂ္ဂဇင်း သြဂုတ်လ ၂၀၀၇ မှာပါတဲ့ဆောင်းပါး။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးအဆုံးမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လို့ ရေးထားတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးထင်တာပဲ။ ပုံကို တော့ google ကနေရှာပြီးယူထားပါတယ်။ Share this:FacebookLike this:Like Loading...
Entry filed under: ဂျူး, Sharing. Tags: .	မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ( ၂၃)	အဖော်၊အထီးကျန်တိတ်ဆိတ်မှုနှင့် အနုပညာ(၂)- ဂျူး	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...